Kugadzira - Quanzhou Bangni Biotechnology Co., Ltd.
Kuumba chiitiko chakakosha kwazvo mufekitori yeinsole. Asi nekubatanidza ruzivo rwedu rwekukura rwakakura uye tekinoroji yedu mune zvinhu, tinogona kupa mutengi wedu mhando yepamusoro inoshanda orthopedic insole chigadzirwa, icho chinogona kubatsira kusunungura vanhu kubva pazasi petsoka mamiriro: Kurwadziwa kumashure, kurwadziwa kwemabvi, kurwadziwa chitsitsinho, kudonha arch, kwakakwirira Arch uye plantar fasciitis.
Dzidza Zvimwe >>
Polyurethane jekiseni imwe nzira hombe yekugadzira insole uye zvigadzirwa zvekuchengetedza tsoka. nekushandisa tekinoroji yedu, tinogona kupa iyo PU insole, Boost insole uye Gel insole.
Poron zvinhu izvo zvine mhando yakanaka uye kuita kukuru. Kukwerekesa maitiro akaomesesa ekugadzira, ayo anoda chaizvo chishandiso uye mhizha ine hunyanzvi. Nokusvetuka, tinogona kushandura zvinhu kuita mukobvu dzakasiyana uye chimiro, kusvika 100% inokodzera dhizaini yevatengi.
Mazuva ano, kugadzirisa ndiyo inonyanya kuita musika. kuitira kuti tisangane nevatengi 'kudiwa kwechiratidzo chetsika dhizaini, isu tinounza iwo sublimation anodhinda mufekitori yedu, kuti tikwanise kugadzira nekugadzira chigadzirwa chemutengi wedu mukubudirira kukuru.